Dastabej » भारतमा किन हुन्छ पटक–पटक किसान आन्दोलन ?
भारतमा किन हुन्छ पटक–पटक किसान आन्दोलन ? – Dastabej
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा चिरञ्जीवी आचार्य
काठमाडौं । भारतमा यतिबेला ठूलो संख्यामा एकीकृत भएका किसानले सरकारले ल्याउन लागेको कृषि विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शन दिनहुँ नयाँ दिल्लीको सडकमा प्रर्दशन गरिरहेका छन् । भारतको सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यस अगाडि पनि निकै टाढाबाट आएर कृषकहरुले नयाँ दिल्लीमा ठूलो आन्दोलन गरेका धेरै उदाहरण छन् । दिल्ली बाहिर गरिने आन्दोलन केन्द्र सरकारले नसुन्ने गरेका कारण नै उनीहरु नयाँ दिल्लीसम्म नै आउने गर्दछन् । पुनः एकपटक किसानहरु किन सडकमा आएका छन् त ?किसानको माग
अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा किसानले विरोध प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिइरहेका छन् । मंगलबार यो धर्ना कार्यक्रमको लगातार छैटौं दिन हो । विशेषगरी भारतका किसानहरुले सरकार न्यूनतम मूल्य ९एमएसपी० को विषयमा आफ्ना माग संवोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म भारतको सरकारले किसानहरुबाट अन्नको भाउ तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम भए पनि सोही मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको थियो । यसको उद्देश्य किसानहरुलाई राहत प्रदान गर्नु थियो । तर,अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने सरकारले कम्तीमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानबाट अन्न किन्नैपर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन । यसले किसानहरुलाई मर्का पर्ने भन्दै उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
किसानहरुले एमएसपीभन्दा कम मूल्यमा अन्न खरिद गर्नुलाई आपराधिक कार्य घोषणा गरिनुपर्ने बताएका छन् । साथै, एमएसपीमा सरकारी खरिद जारी रहनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कुनै पनि अन्नको सिजनमा भाउ सस्तो भएर एमएसपीभन्दा पनि कममा आउने गरेको छ । यसले किसानले गरेको लगानीबराबरको प्रतिफल पनि नपाउने जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारले एमएसपीमा किसानबाट जुनसुकै समयमा पनि अन्न खरिद गर्दै आएको छ । अहिले ल्याइएको नयाँ नियममा भने यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन । सरकारका आलोचकहरु किसानप्रतिको बेवास्ता गर्दै यो प्रस्ताव अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले भने कृषि क्षेत्रमा सुधारको लागि नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सरकार के भन्छ ? गत सेप्टेम्बर २० मा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किसानबाट एमएसपीमा अन्न खरिद जारी राख्ने बताएका थिए । यद्यपि यो व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्न भने केन्द्र सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सरकारले २३ प्रकारका अन्न एमएसपीमा किसानहरुबाट खरिद गर्दै आएको छ । भारतमा केवल ६ प्रतिशत किसानले मात्र आफ्नो अन्नको एमएसपी पाउँछन् । जसमा अधिकांश किसान हरियाणा र पञ्जाबका छन् । त्यसैले पनि यो आन्दोलनमा उक्त दुई राज्यका किसानहरु धेरै सहभागी भएका छन् ।
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार १८:०९ प्रकाशित